Chelsea Oo Guul Weyn Ka Gaadhay Crystal Palace, Ben Chilwell Oo Wixii Ay Awoodi Waayeen Werner Iyo Havertz Sameeyay Xilli Blues Ay Wadada Guulaha Kusoo Laabteen - Gool24.Net
Chelsea Oo Guul Weyn Ka Gaadhay Crystal Palace, Ben Chilwell Oo Wixii Ay Awoodi Waayeen Werner Iyo Havertz Sameeyay Xilli Blues Ay Wadada Guulaha Kusoo Laabteen
Kooxda Chelsea ayaa guul ka gaadhay dhigeeda Crystal Palace oo marti ugu ahayd garoonka Stamford Bridge, Blues oo kulankan kusoo bilaabay dhammaan saxeexyada cusub ee ay sameeyeen intooda diyaarka ah ayaa 4-0 meel ku saaray Eagles.
Kulanka qaybtiisii hore ayaa la isku mari waayay bar-bardhac balse goolal ka kala yimid Ben Chilwell oo wacdarro dhigay, Kurt Zouma iyo Jorginho oo laba rigoore dhaliyay ayaa guul raaxo leh siiyay Chelsea.
Labada dhinac ayaa ku bilawday qaab dar dar leh oo ay labaduba raadinayaan goolka furitaanka iyadoo ay Chelsea ahayd kooxda goolka ku dhaw dhaw.
Timo Werner ayaa fursadii ugu horreysay ee gool loo bedeli karayay ee kulankan helay iyadoo baas uu ka helay mid kamida xiddigaha kooxdiisa oo uu toos u laagay uu goolhaye Vicente Guaita si sahlan ku xakameeyay.
Markale Abraham ayaa daqiiqadii 35-aad ee kulanka qasaariyay fursad uu hoggaanka ugu dhiibi karayay Chelsea, weeraryahanka oo baas dheer helay ayaa ku dhex xakameeyay balse darbadiisa ayuu dhaafin waayay goolhaye Guaita oo uu meel dhaw oo geeska goolka ah kubadda kaga helay.
Qaybta hore ee kulanka ayaa ku dhammaatay bar-bardhac goolal la’aan ah, kulanka ayaa ahaa mid aad u adag iyadoo Crystal Palace ay xooga saaraysay inay shabaqeeda ilaashato.
GOOAL: Saxeexa cusub ee Chelsea ee Ben Chilwell ayaa goolkiisii koowaad ee kooxdaas helay kulankan oo ahaa midkiisii ugu horreeyay ee PL ah ee uu ugu bilawdo, Chilwell ayaa meel dhaw ku helay kubad sarre oo uu madaxa lasoo helay Tammy Abraham isaga oo gantaal dhex dhigay goolka.
GOOAL: Goolka labaad ee kulankan ayaa yimid, daafacyada Chelsea oo qabtay shaqadii ay qaban waayeen weerarkeedu ayuu markale Chilwell karoos cajiib ah soo tuuray iyadoo uu Kurt Zouma oo weerarka ku jiray madax cajiib ah shabaqa dhex dhigay isaga oo goolkiisii koowaad ee Premier League ah ee Chelsea kahor helay Werner iyo Havertz walow uu ka wakhti yar yahay.
GOOAL: Fursadihii kulanka oo aad mooday inay markan goolal isku bedeleen ayuu Jorginho gool rigoore ah jihada qaldan u diray goolhaye Guaita kaddib qalad lagu galay Abraham.
GOOAL: Markale Blues ayaa goolka afraad helay waxaana rigoorihii labaad ee kulankan dhaliyay Jorginho kaddib qalad lagu galay saxeexa cusub ee Kai Havertz.